HGH Thailand pharmacy - Chikamu chekuwedzera hormone
NeHGH Thailand January 10, 2018
HGH (somatotropin) muThailand
Growth hormone (somatotropin) - inonyanyozivikanwa pakati pevatambi, mashizha uye vamwe vatashanyi muThailand, inhengo yezvemasitemu. Pakupedzisira, sevanabolic, somatotropin yaishandiswa chete mukugadzira muviri, weightlifting nemamwe mitambo ine chokuita nekukura kwemasimba, iye zvino vatambi, varairidzi uye vamiririri vemitambo yemitambo vanoshandisa kunyange zvakanyanya kudarika varimi vemiti.
Somatotropin yakaratidza kuva chigadziro chakanaka chekuwedzera kutsungirira, zvakanyatsoratidzwa mukurapa kwekukuvara. Nokudaro, kuwanda kwechirwere ichi kunoramba kuchikura. Pakupedzisira, nounyanzvi, uchishandisa chigadzirwa ichi, unogona kuwedzera kukura kwemutambi wechidiki, uye izvi zvinokosha uye zvinokodzera kutaura.
Nei muviri uchida somatotropic hormone (HGH)? Soma zvinoreva muviri. Somatotropic zvinoreva kuva ne "kupisa" -kubatana kwemuviri. Pakukura kwemuviri, somatotropin ndiyo huru yekukura. Kukura kwomuviri zvakananga kunobva pauwandu hwayo, zvose muhurefu uye hupamhi. Kunyanya somatotropin mumuviri, kunyanya munhu anokura.
Mushure mekuwedzera kwechikwata mumapfupa emasaga, asi kuwedzera kwemapfupa murefu kunorega, kwechinguva nguva kune huri kuwedzera kwemapfupa muhupamhi. Mune zvimwe zvikamu zvemafupa, nzvimbo dzekukura hadzisi pasi pekushushikana mukati mehupenyu hwemunhu. Nzvimbo dzakadaro dzekukura dziripo mumutsara wezasi, mhino, maoko nemakumbo.
Dzimwe nguva zvinowanzoitika nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana pazera duku, the
kuchengetedzwa kwekukura kwehomoni kunowedzera. Zvadaro zvikure zvihombe, izvo dzimwe nguva zvinosvika pakureba kwepfuura 2 m. Ichi chinonzi chinonzi chirwere uye chinonzi "gigantism." Vanhu vazhinji vari panyika yedu, zvisinei, vanozofara zvikuru kuti vasava zvifumi, asi vanhu vakakwirira. Vabereki vakawanda vanoda kuwedzera kukura kwevana vavo, uye ikozvino zvave kutokwanisika.
Nenzira, munhu akareba kupfuura ose akamborarama pasi pano, aiva nekuwedzera kwe 2 m 48 cm (!). Dzimwe nguva kuvharwa kwekukura kwehomoni kunowedzera zvinoshamisa mumutumbi mukuru, apo nzvimbo zhinji dzekukura dzakatovharwa. Muchiitiko ichi, tsvina yemunhu wacho, mapapiro, maoko nemakumbo zvakakura zvakakura. Ichi chiitiko chinonzi acromegaly, kureva kuwedzera munharaunda dzomuviri. Mumunhu mukuru uye muviri wakakwana, somatotropin inoita anabolic mabasa.
Icho chinokonzera maitiro eprotheni muzvikamu zvose nenyama dzisingatauriki. Vanhu vashomanana vanoziva kuti HGH pamwe nezvose zvinosanganisira hormone inoshungurudza. Mukudzvinyirira, ropa rekuisa ropa muropa rinowedzera zvakasimba, uye izvi zvinobatsira muviri kuti uenzane nemamiriro asina kunaka kuburikidza nekuwedzera mapuroteni, zvikurukuru mumasimba emagetsi esero.
Nokudaro, vanhu vane musimboti wakasimba ane skeleton yakanaka yakasimba mune zvese zviri nani kubvumira nemhando dzose dzezvinetso nekushushikana kwehupenyu hwedu. Vanobatsirwa mune izvi ne somatotropin. Sezvo nzvimbo dzekukura dzejaya, pasi, maoko nemakumbo hazvina kumbovharwa, idzi "zvikamu" zvinokura muupenyu hwose. Asi kunyange kana vakwegura vanokura zvishomanana, pavhareji ne 5-8 mm.
Kune, zvisinei, uye zvakasununguka, munhu pazera remakore ekurasira, mhino nemakumbo zvinosvika pakukura kwakashamisa, iyo inoshanda sechinhu chinogara chiripo kune majokes akapoteredza. Zvidzidzo zvikuru muThailand zvakaratidza kuti mushure mokupedzwa kwekukura pazera remakore, munhu uyu muhupenyu hunotevera huri "hura." Asi kukura uku kwakanyanya kuduku. Nenguva ye 60, murume anokura 8-10 mm kure uye anenge akaenzana.
Izvi kukura, zvisinei, hazvisionekwi nekuda kwekukotama uye kuderera kwemisungo, iyo inouya kuzera iri kuvanhu vakawanda. Nekushaikwa kwekukura kwehomoni muhuduku, vanhu vanokura zvikuru, uye vanonzi vadiki. Mumutauro wechiremba, izvi zvinonzi "hypophysial nanism." Muhupo hwekushaiwa kwekukura kwehomoni mune munhu mukuru wekukura kwakakosha, marudzi akasiyana-siyana eudystrophy anobudirira, ayo dzimwe nguva kunyange kuguma murufu, asi haawanzoitiki. Mukati mawo, zita rokuti "hypophysial nanism" rave rave rinoratidza kuti somatotropin inobudiswa mumutambo wepituitary.
Chii chinonzi pituitary gland iye zvino unoziva zvose kana zvinenge zvose. Iyo gland pituitary ndiyo yepamusoro yeperesi inoputika, iyo inowanikwa pachigadziko cheropi. Chimiro uye chiyero chemuti wepituitary unofanana nekucheka. Plandishi gland inonyatsodzivirirwa musimba rekukanganisa kwayo zvishoma.
Inowanikwa musimba rakasimba resafu - "chigaro chechiTurkey" panheyo yehenya. Mune hutachiona humwe humoni hunobudiswa - hutori-hunoita hutoni (hunoita chirwere chetachiona), adreno corticotropic (inoita kuti adrenal gland), gonadotropic (inobata zvipembenene zvepabonde), nezvimwe.
Basa repituitary rinotungamirirwa ne hypothalamus, nzvimbo inokosha ye midbrain. Ikoko, vakasununguka uye mitemo vari kukura. Nokuti somatotropic hormone, somatoliberin uye somatostatin inokosha. Somatoliberin hypothalamus inowedzera kuchengetedzwa kwehomoni inonzi hormone nerutivi rwepituitary. Somatostatin, pane zvinopesana, inodzivisa kugadzirwa kwe somatotropin. Kana tichida kuwedzera huwandu hwekukura kwehomoni mumuviri, zvino zvakakosha kana kuwedzera muwandu we somatoliberin, kana kuderedza chiyero che somatostatin.
Kwenguva yakareba yaitendwa kuti kukura kwehomoni kunogona kuzviita pachayo kuita mishonga yemasisita, cartilage uye nhengo dzomukati. Zvadaro zvakaitika kuti izvi hazvisi izvo. HGH inokwanisa kukanganisa masero chete mu vitro muzvikamu zve2,000 nguva dzakakwirira pane zvepanyama. Mumuviri wakajairika, HGH inoshanda chete pachiropa.
Chiropa chinounza insulini-yakafanana nekukura, iyo inonziwo somatomedin. Somatomedin - anewo anabolic uye kukura kwechiitiko, ichikanganisa masero anoshandiswa. Sechiremba, ini ndinowanzoona zviitiko kana mushure mekurwara kwechiropa chakanyanya mwana anorega kukura uye mamiriro akafanana nepituitary nanism inoitika, kunyange zvazvo chirwere ichi chakadaro chinokonzerwa nekushaiwa somatomedine.
Kune rumwe rutivi, acromegaly inowanzoenderana nehuwandu hwemashuga eropa. Chirwere chiri munyaya iyi chinokonzerwa nehuwandu hwepamusoro hwekuwana somatomedine muropa. Nenzira yakawanda, ketani yekutonga kwevanabolism ne somatotropic hormone inoshandiswa kumakumbo ematope ndeaya:
Kana tichida kuva neanabolic effect, taurai, pamasero emasumbu, zvino tinokwanisa:
1. Wedzerai chiyero che somatoliberin mu hypothalamus.
2. Deredza kudarika kwechimwe chemaatatinstatin.
3. Pinda mumuviri STG.
4. Tumirai mumuviri somatomedin.
Mune zvimwe zvezviitiko izvi, chigumisiro chekupedzisira chichabudirira. Uye iwe unogona kuenda pamwe chete nenzira yekutaura chinhu chakakosha kubva kune kunze, uye pamwe nenzira yekukurudzira kugadzirwa kwayo nehupenyu hwega. Iwe unogona zvakare kuenda munzira yekuwedzera
kunzwisisika kwemasero kusvika kune zvinodiwa zvinovaka muviri, asi hurukuro iyi ichiri kuuya. Ngatitarisei zvakanyanya neketani rose remutotropin mutemo
uye utange iyi kurapwa ne somatotropin. Pashure pezvose, mune zvakaitika kare, zvose zvakatanga nayo. STG is peptide hormone. Inoumbwa neketani yakareba yakine amino acid inosanganisira 191 amino acid masara. Kubva kare 1921, physiologists mukuedzwa kwezvipfuwo kwakavhiringidza gigantism yekuedza pavakatanga kubvisa zvinyorwa zvisina kufanira zvehutambo hwekare hwemakumbo emhuka. Sezvatinokwanisa kuona, mukana wekuwedzera kukura kwechimiro chechidiki chave chichiratidzwa kwenguva yakareba kare.
Yakanatswa somatotropin yemhuka yakatanga yakatanga iri mu 1944, uman - mu 1956. Kunyange zvakadaro, nerubatsiro rweSHH, vana vaduku vane migumisiro yakanaka nguva dzose vakatanga kutapwa pamwe nekugona. Zvadaro, zvakawanikwa kuti kune maitiro matatu emhando dzeSHH dzine maoko ezvisikwa zvakasiyana. Mune vanhu, STH inogadzirwa mune izvo zvinonzi mazita easinophilic emucheka wepituitary.
Mumakumbo easinophilic cells, sekutonga, izvo zviitiko zvegigantism zvinokura apo kukura kwevanhu kwakawanda kupfuura 2 m. Panguva iyi yekuvandudzwa kwemishonga, matamu akadaro anonyatsokurasirwa zvose zvechirwere uye zvinoshanda. Kukura kukuru, zvisinei, kunoramba kuripo. Pakati pevadzidzi-class-basketball players, pane vanhu vazhinji vakave vachivhiyiwa chiito mumakore avo vaduku.
Dumbu racho rinobviswa mumhino (!), Uye munhu wacho anorarama, sokunge hapana chakaitika. Iko kune, zvisinei, zvisingabviri. Kune rumwe rutivi, nhamba yevatsva "vakakura" vanoita sekukura iri kukura, iyo yechirwere ichi yakakonzerwa nekura hormone kuti ikure kukura.
Kuvharidzirwa kwekukura kwehomoni muropa kunotyisa. Pakati pezuva pane, sekutonga, 6-9 mapeji makuru. Nhamba yezvikomo zvakadaro dzimwe nguva inosvika ku12. Kureba kwemakomo kunowedzera nekuita muviri uye munguva yekurara. Pazvokudya, kukwirira kwemapuranga ekusunungurwa kwe somatotropin, pane zvinopesana, kunoderedza, kunyanya kana chikafu ichi chikahydrates.
Iyo STG yezvinyama zvose zvinokonzera imwechete ye biologically inoshanda. Phylogenetic pasi mhuka yemhuka inopinda kune maGG akareba, asi STG yezvipenyu zviduku haigadziri pamhando dzakakwirira. Vanhu STG, somuenzaniso, vanoita pamarudzi ose emhuka, asi hapana yemhuka yematatotropin munhu wese anoita.
STG mbongoro dzichaita zvishoma nezvishoma mhuka dzemhuka dzakasununguka, asi kwete kuvanhu. Iyo STG ye whale ichaita zvekare pamhuka dzemusangano wepasi, asi kwete pamunhu chete kana mbongoro, nezvimwewo.
HGH Japan - delivery to Tokio
HGH muUnited States - kutumira Genotropin kuenda kuU.S.